China Tungsten Carbide Choke Beans yeOiri Munda Maindasitiri Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
Tungsten Carbide Yakavhunga Mahara eOiri Munda Maindasitiri
* CIP Yakatsikirirwa
Choke bhinzi inowanzoshandiswa mune yakanaka yekukachidza vharuvhu yekudzora kuyerera, kudzipwa bhinzi yakafanana neCameron mhando H2 hombe joni kudzipwa bhinzi, muviri Chinyorwa: 410SS, yakakomberedzwa neTungsten Carbide (C10 kana C25) kana ceramic, kuvadzivirira kubva kukuora uye hasha kusakara.
Tungsten carbide inodzipwa bhinzi inoshandiswa kudzora kuyerera kwemvura uye inowanzo gadzirirwa pamusoro kana padyo nemusoro wetsime, iri bhinzi rinodzipwa rinomanikidzwa neCIP muchina kuchengetedza mhando. Iyo ine yakanaka yekupfeka kuramba panguva yekushandisa.
N&D carbide seyepasi rese Choke Valve Bean mutengesi, ndeyekuita ayo matekinoroji anowanikwa kune vatengi vayo vekupedzisira pamutengo unodhura, nekufananidza mhando yepamusoro. Semutungamiri weindasitiri weChoke Valve Bean, tinogona kugadzira yekutanga-chiyero Choke Valve Bean nemutengo unonzwisisika. Isu tarisiro yedu yekutanga kuendesa zvigadzirwa zvinopfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu nenzira isingadhuri. Kana iwe uchida chero rubatsiro pakusarudza iyo chaiyo Choke Valve Bean kuti ienderane nezvaunoda, tinofara kutora mazwi anoenderana nezvinodiwa.
Pashure: Tungsten Carbide Inlet Plate
Zvadaro: Tungsten Carbide Valve Spare Zvikamu